Women's health care | शरणार्थी र आप्रवासी लागि जानकारी | USAHello
महिला स्वास्थ्य र स्वास्थ्य
शरणार्थी र आप्रवासी महिला आफ्नो शरीर सिक्न र आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न को लागि यो महत्त्वपूर्ण. शरणार्थी र आप्रवासी लागि महिला स्वास्थ्य हेरविचार बारेमा जान्न. अनलाइन संसाधन र कहाँ हेरविचार प्राप्त गर्न पाउन.
किन सामान्य स्वास्थ्य हेरविचार देखि महिला स्वास्थ्य हेरविचार फरक छ? एक महिलाको स्वास्थ्य धेरै उनको प्रजनन स्वास्थ्य र जीवनको चरणमा जोडिएको छ. (प्रजनन स्वास्थ्य आफ्नो अवधि अर्थ, बच्चाहरु भइरहेको, र रजोनिवृत्ति मार्फत जाँदै।)
प्रजनन स्वास्थ्य बुझ्न र कसरी आफ्नो शरीर काम गर्दछ राम्रो महिला स्वास्थ्य हेरविचार गर्न पहिलो कदम हो.
महिनावारी के हो?
महिनावारी आफ्नो अवधि जस्तै कुरा हो. यसलाई प्रजनन-उमेर महिला अनुभव मासिक योनी रक्तस्राव छ (उमेर बारेमा 12 गर्न 55). महिनावारी एक महिला गर्भवती छैन भन्ने देखाउँछ. तपाईंको अवधिको र अवधि बीच पटक भनिन्छ आफ्नो “menstrual चक्र।”
अवधि तीन सात दिन देखि अन्तिम. योनी बाट आक्रान्त बाहेक, तपाईं हुन सक्छ:
तल्लो फिर्ता दुखाइ
सुनिंनु र दुखेको छाती
मुड swings र irritability
टाउको दुखाइ र थकान
Premenstrual सिंड्रोम, वा पीएमएस, अवधि अघि शुरू लक्षण को एक समूह छ. यो भावनात्मक र शारीरिक लक्षण समावेश गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं आफ्नो चक्र मा ठूलो परिवर्तनहरू छन् भने आफ्नो स्वास्थ्य हेरविचार प्रदायक परामर्श. तिनीहरूले उपचार पर्छ भनेर अन्य समस्या को संकेत हुन सक्छ. महिनावारी बारेमा थप जान्न.
जब म गर्भवती छु कसरी म हेरविचार गर्न सक्नुहुन्छ?
Prenatal हेरविचार स्वास्थ्य हेरविचार त्यो गर्भवती हुँदा एक महिला डाक्टर प्राप्त गर्दछ कि बुझाउँछ.
यो उनको स्वास्थ्य र उनको बच्चा को स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न एक गर्भवती महिला नियमित रूपमा उनको डाक्टर दौरा महत्त्वपूर्ण छ. तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भने, तपाईँले आफ्नो डाक्टर कुरा पक्का गर्दा र जहाँ तपाईं prenatal हेरविचार प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ.
म गर्भावस्था र दिने जन्म बारेमा जान्न के चाहियो?
गर्भावस्था धेरै नयाँ आमा को लागि एक अनिश्चित समय हुन सक्छ, आमा र बच्चा दुवै स्वस्थ रहन निश्चित गर्न के बारेमा प्रश्नहरू धेरै भरिएको.
MedlinePlus लागि देख सुरु गर्न राम्रो स्थान छ गर्भावस्था बारेमा सामान्य स्वास्थ्य जानकारी. सारांश पढ्नुहोस्. विषयहरू विभिन्न जानकारी तपाईं लिन Thenchoose लिंक, कसरी गर्भावस्था को समयमा आफ्नो शरीर जे गर्न सुरक्षित खेती बाट.
गर्भावस्था को समयमा स्वस्थ रहन
तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भने, यसलाई आफ्नो स्वास्थ्यको हेरचाह गर्न विशेष महत्त्वपूर्ण छ, सहित तपाईं खान र पिउन के सावधान रहनुहोस् हुनुको र तपाईं व्यायाम कसरी. बनाउन तपाईंलाई स्वस्थ रहन कसरी हुन सक्छ भनेर कुनै पनि प्रश्न वा सरोकार बारेमा आफ्नो डाक्टर बोल्न निश्चित. गर्भावस्था को समयमा आफ्नो स्वास्थ्य हेरविचार कसरी लिन सिक्न.
स्वास्थ्य सूचना अनुवाद प्रदान गर्दछ जो एक वेबसाइट जानकारी गर्भावस्था र प्रसब सम्बन्धित. तपाईं सिक्न चाहनुहुन्छ कि विषय छनौट. त्यसपछि, अर्को पृष्ठमा, आफ्नो भाषा चयन.
मा childbirth जडान, तपाईं शारीरिक परिवर्तनहरू बारे थप सिक्न सक्छौं एक महिलाको शरीर त्यो जन्म दिने छ, जबकि मार्फत जान्छ. तपाईं श्रम समयमा हुन सक्छ र हेरविचार कस्तो तपाईं अस्पतालमा प्राप्त आशा गर्न सक्छौं समस्या कस्तो पढ्न सक्नुहुन्छ. तपाईं जन्म दिने सर्वोत्तम अनुभव गर्न सकून् भनेर अगाडि कसरी योजना पढ्न सक्नुहुन्छ.
धेरै राम्रो को संकेत र श्रम को लक्षण बारेमा expectant आमा को लागि उपयोगी जानकारी को धेरै समावेश. पनि, तपाईं एक अस्पतालमा जन्म दिन यदि तपाईं अनुभव हुन सक्छ के पढ्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं जन्म दिएको गरेपछि, स्तनपान यसलाई आमा र बच्चा दुवैको लागि स्वास्थ्य लाभ को धेरै छ किनभने तपाईंको नवजात बच्चा खुवाउन ठूलो तरिका हो. विशेषज्ञहरु भन्न यदि सम्भव छ कि, बच्चाहरु कम्तिमा पहिलो लागि breastfed गर्नुपर्छ 12 आफ्नो जीवन को महिना.
राम्रो पढ्न स्तनपान Basics को सिंहावलोकन, breastfeed गर्दा धेरै आमाहरू सामना सही breastfeed गर्ने बारे निर्देशन र साधारण समस्याहरू एक अन्वेषण सहित.
ला Leche लिग मद्दत गर्छ कि संसारभरि महिलाहरु सफलतापूर्वक breastfeed अन्तर्राष्ट्रिय संगठन हो. आफ्नो क्षेत्रमा एक ला Leche लिग सल्लाहकार फेला.
तपाईं आफ्नो बच्चाहरु breastfeed गर्दा एक स्वस्थ दिनचर्या राख्न, किनभने तपाईं भित्र जान्छ कि सबै आफ्नो बच्चाहरु जान्छ, धेरै. सिक्न कसरी पदार्थ दुरुपयोग स्तनपान असर.
कम आय गर्भवती महिला र नयाँ आमा को लागि सेवा
अमेरिका मा, भनिन्छ एक कार्यक्रम महिला, शिशुहरू र बच्चाहरु (WIC) कम आय गर्भवती महिला मद्दत गर्छ, नयाँ आमा र आफ्ना छोराछोरीहरूलाई (अप गर्न5वर्ष पूरानो) स्वस्थ रह. को WIC कार्यक्रम सेवाहरूको एक नम्बर प्रदान गर्दछ, स्तनपान संग सहयोग सहित, पोषण कक्षाहरू, र कुपन केही स्वीकृत पोषण खाद्य पदार्थ किन्न.
तिमी सक्छौ आफ्नो राज्य मा WIC फेला. आफ्नो राज्य मा WIC एजेन्सी को लागि दिइएका टेलिफोन नम्बर कल. तपाईं WIC लाभ को लागि लागू गर्न एक नियुक्ति बनाउन चाहनुहुन्छ तिनीहरूलाई बताउन.
त्यो menstruating रोक्छ र अब छोराछोरीलाई छ गर्न सक्षम छ जब रजोनिवृत्ति एक महिलाको जीवनमा अवधि छ. रजोनिवृत्ति प्राय उनको प्रारम्भिक 50s मा एक महिला हुँदा हुन्छ, तर केही महिला लागि, यसलाई पहिले हुन सक्छ.
धेरै महिलाहरु रजोनिवृत्ति समयमा नकारात्मक शारीरिक लक्षण केही संयोजन अनुभव. एक डाक्टर सामान्यतया यी लक्षण व्यवहार गर्न मद्दत गर्न सक्छ. बारेमा रजोनिवृत्ति थप जान्न.
साधारण महिला स्वास्थ्य अवस्था
केही चिकित्सा अवस्था थप सामान्य मानिसहरू भन्दा महिला मा. धेरै अवस्थामा, यी महिला प्रजनन अङ्गहरू असर चिकित्सा अवस्था हो (स्तन वा ग्रीवा क्यान्सर रूपमा). हाम्रो निकायहरु, आफूलाई स्पष्ट प्रदान, महिला शरीर र साधारण महिला स्वास्थ्य अवस्था बारे वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट सही जानकारी.
महिला स्वास्थ्य स्क्रीनिंग
स्वास्थ्य स्क्रीनिंग तपाईं एक विशेष चिकित्सा हालत छ भने जाँच गर्न परीक्षण हो. साधारण स्वास्थ्य स्क्रीनिंग समावेश:
हड्डी खनिज घनत्व परीक्षण
स्तन क्यान्सर स्क्रीनिंग
ग्रीवा क्यान्सर स्क्रीनिंग (पनि पीएपी परीक्षण रूपमा ज्ञात)
एचआईभी र अन्य एसटीडी परीक्षण
तपाईंले यी र अन्य साधारण स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कि डाक्टर को महिला को लागि सिफारिस बारेमा थप सिक्न सक्छौं महिला स्वास्थ्य कार्यालय.
महिला लैंगिक काटन
महिला लैंगिक काटन (FGC) केही देशहरूमा एक सांस्कृतिक अभ्यास छ. जबकि एक सांस्कृतिक परम्परा रूपमा FGC बारेमा कडा महसुस गर्ने धेरै मानिसहरू छन्, यो संयुक्त राज्य अमेरिका मा FGC गर्न अवैध छ. यस बारेमा थप जान्न FGC को स्वास्थ्य प्रभाव.
कसरी डाक्टर जान
कसरी स्वस्थ हुन र रोगहरु रोक्न